Yeyiphi eyona antivirus yasimahla kwi-Intanethi yePC esebenzayo? | Iindaba zeGajethi
UPaco L Gutierrez | | ngokubanzi, software, Windows
Iintsholongwane, olo tshaba lunkwantyo lwayo nayiphi na inkqubo enenkqubo yokusebenza, kodwa nge ukukhankanywa okukhethekileyo kweWindows nangona kungekho nkqubo ikhululwayo kwezi Trojans. Xa sithenga ikhompyuter sicinga kuphela ngokukhangela, ukudlala, ukukhuphela umxholo okanye ukusebenza, sicinga ukuba ikhompyuter ayifuni iinkqubo zokukhusela ukuze zisebenze ngokufanelekileyo kwaye bekunjalo ekuqaleni.
Ixesha kunye nokukhutshelwa okuninzi kamva kuxa sinokuthi siqale ukuqaphela iingxaki kwikhompyuter, zonke ezo zinto zikhutshelweyo ezingalawulwayo, olo tyelelo kuzo zonke iintlobo zamaphepha kunye nomkhwa olula wokusebenzisa iipendrive ezidlulileyo kwezinye iikhompyuter ezininzi kunokukhokelela kwikhompyuter yakho zonke iklasi yeefayile ezinobungozi ezinakho ukuthoba ubunzima kwikhompyuter yakho ukuze ingabinamsebenzi kwaphela. Kodwa ingxaki ayisiyiyo kuphela ilahleko yokusebenza, nayo sinokwenza iifayile zethu okanye idatha yobuqu ukuba ifumaneke kubantu besithathu abanokuthi babe nolwazi olubalulekileyo kuthi. Masibone ukuba zeziphi ezona zilungileyo esinokuzifumana simahla.
1 Ngaba kungcono ukuhlawula okanye ukusebenzisa ukhetho olukhululekileyo?
2 I-Avast yasimahla yeAntivirus
3 I-AVG yasimahla yeAntivirus
4 IKaspersky Antivirus Simahla
5 Bitdefender Antivirus Simahla
6 I-Panda Free Antivirus
7 Kutheni usebenzisa nayiphi na kwezi endaweni yeWindows Defender?
Ngaba kungcono ukuhlawula okanye ukusebenzisa ukhetho olukhululekileyo?
Konke kuza kwiziko ledatha elikhulu, apho iinkampani ezixhasa ezi nkqubo zihlala zihlaziya ukuze kugcinwe zonke izoyikiso ze-malware ezinokuthi zihlasele iqela lethu. Ngale ndlela, nokuba intsha intsholongwane entsha kangakanani, i-antivirus yethu iya kuba nakho ukujongana nayo.
Kodwa kwakhona Ukusebenza kwale antivirus ngokuchasene ne-malware kubalulekile, okanye ifuthe ekusebenzeni kweekhompyuter zethu, kuba ezinye zeenkqubo zinokucothisa inkqubo yethu kakhulu ngenxa yokusetyenziswa kakhulu kwezixhobo ezenzayo ngasemva. Kuya kufuneka sithathele ingqalelo ukusetyenziswa ngokulula okanye indlela enomdla ngayo.
Ngale ndlela I-antivirus yasimahla ikhuphisana ngokwemiqathango elinganayo noogxa bayo abahlawulwayo, Ukufezekisa ukusebenza okufanayo ngokuchasene neentsholongwane kunye nokusebenza okuphezulu kunye namanqaku okusebenziseka.
Umahluko wenziwe kukhetho olongezelelekileyo noluphucukileyo esinokuthi sikhangele kuzo iinkampani, kodwa ukuzisebenzisa ngokwethu asizukuwubona umohluko ngaphandle kwepokotho.
I-Avast yasimahla yeAntivirus
Saqala somelela ngento ethathwa njengenkosi ye-antivirus yasimahla, ayinakuze iphoswe kuluhlu lweyona antivirus yasimahla emarikeni. Inkqubo ethi, ngokweengcali ebaleni, ibonelela ngobuninzi ngokokhuseleko, Ekuphakameni kwabanye abahlawulwayo nangaphezulu kwezinye iindlela ezininzi. Ukongeza koku, ifumana iziphumo ezilungileyo ngokubhekisele ekusebenzeni, yiyo loo nto iyinkqubo esebenzayo.
Ukuba songeza koku kulula ukuphatha, qwalasela kwaye uqonde xa isilumkiso sesoyikiso sinokwenzeka kwaye konke oku kubangela ifuthe elincinci ekusebenzeni kwekhompyuter yethu. Oku ngokungathandabuzekiyo yenza ukuba iAvast yeyona antivirus ibalaseleyo kwikhompyuter yethu, kodwa ukuze ingabi mfutshane kakhulu siza kunika ezinye iindlela kuba ezinye zinokubonakala zingcono okanye zinomtsalane ngakumbi.
I-AVG yasimahla yeAntivirus
I-AVG inenguqulo yasimahla kodwa ihlawulelwe enye. Inketho yasimahla ine-malware yohlalutyo lwazo zonke iintlobo, uhlaziyo lwexesha lokwenyani, ukuvimba ikhonkco, ukhuphelo kunye nohlalutyo lokusebenza yeqela lethu.
Inomda ngakumbi kunohlobo oluhlawulelweyo, kodwa kwinqanaba lokhuseleko ziyafana, yiyo loo nto kunzima ukucebisa ngentlawulo. Inqanaba elingenakuthelekiswa nanto ngokweengcali ezininzi, ngokulula kokusetyenziswa kunye noqwalaselo njengezona zinto zinomtsalane kwaye ngaphandle kokuphazamisa ukusebenza kwezixhobo zethu.
IKaspersky Antivirus Simahla
Njengakwezinye, sinenguqulo ehlawulelweyo kunye nohlobo lwasimahla, kwinguqulelo yasimahla asizukukhathazeka malunga nelahleko yokusebenza ngenxa yokusetyenziswa gwenxa kwezixhobo, kuba ifuthe alinabungozi ngokupheleleyo.
Le nkqubo isinika ukhuseleko olupheleleyo kuzo zonke iintlobo ze-malware kwaye inezixhobo ezithile zokukhusela kolona lwazi lwethu lubalulekileyo. Nangona ayisiyiyo eyona antivirus yasimahla esinayo, inguqu yayo ehlawulelweyo iphakathi kweyona antivirus ihlawulwayo.
Bitdefender Antivirus Simahla
Inketho ebalaseleyo kubasebenzisi abafuna iskena se-antivirus esingazenzi nzima izinto emva kofakelo. Yenzelwe ukuba ibaleke ngokupheleleyo ngasemva, iya kusibonisa kuphela izaziso ezibalulekileyo kwimeko yohlobo oluthile lomsebenzi okrokrisayo. Uhlalutyo, ukufunyanwa kunye nokususwa kwe-malware kwenziwa ngokuzenzekelayo.
Iskena ngokukhawuleza kakhulu, ukulawula ukuqhubekeka zonke iifayile kunye neefolda kwimizuzu nje embalwa emva kokuqalisa. Inemisebenzi yokulwa ubuqhetseba kunye nokulwa nobuqhetseba, iyabaphawula kwaye ikwazise ngokukhawuleza ukuba ibabone ukuthintela ukubiwa kwedatha. Ukuba ujonga iskena esingasemva esifanelekileyo ngaphandle kobunzima, olu khetho kufuneka ngokuqinisekileyo lube phakathi kweentandokazi zakho.
I-Panda Free Antivirus
Inketho yesizwe ayinakuphuthelwa kolu luhlu, yinkampani yaseSpain ese-Bilbao naseMadrid. Ukongeza koku, ifumana enye yeetekhnoloji ezinikezelwe kakhulu kwicandelo.
Iyaziwa ngenxa yokusebenziseka kwayo, ujongano, kunye noyilo olwahlukileyo. Kodwa esona sizathu siphambili sivela kwinethiwekhi yabucala yabucala (VPN). I-VPN isebenza ngokudlulisa uqhagamshelo lwakho lwe-intanethi kwiseva ekhuselekileyo. Yonke idatha engenayo kwaye ishiye ikhompyuter yakho ikwi-crypt, ethi kuthintela iiTrojans ekubeni zingene kwi-intanethi yakho. Eli nqanaba lokhuseleko liyacetyiswa kakhulu ukuba sisebenzisa iinethiwekhi zikawonkewonke ze-intanethi.
Ngexesha Inethiwekhi ye-VPN ye-panda isimahla, kodwa inikwe umda kwi-150MB ngosuku. Iya kusinceda kuphela ukuhamba kwaye sisebenzise iposi. Ukuba into esiyifunayo kukusikhusela kukhuphelo, kufuneka siye kuhlobo lwayo oluhlawulelweyo.
Kutheni usebenzisa nayiphi na kwezi endaweni yeWindows Defender?
Windows Defender kwikhompyuter ngokubanzi yimveliso elungileyo kakhulu kwiimfuno ezisisiseko, iya kuthi ibhaqe i-malware kwaye isikhusele kuyo njengoko ezinye iinkqubo zisenza. Kodwa ayiboneleli ngokhuseleko kwezinye iindidi ezininzi zosongelo ezinje ngentlawulelo okanye ubuqhetseba.
Uninzi lokhetho olukhululekileyo, nditsho ezinye ezingabonakali kuluhlu olufana neAvira ziya kusikhusela kuyo yonke into uMkhuseli asikhuselayo kunye nabanye abaninzi abangazenziyo. Ke kungcono kunanto, kunjalo, kodwa andikukhuthazi ukushiya ukhuseleko lwethu ezandleni zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Yeyiphi eyona antivirus yasimahla kwi-Intanethi yePC esebenzayo?
Xiaomi Redmi Qaphela i-9 Pro, ubuhle obuninzi kunye neziphene ezimbalwa